Waxaan sii ahaan doonaa hoggaamiyaha adduunka ee casriga ah tobanka sano ee soo socda - BGR - TELES RELAY
ACCUEIL » DHAQAALAHA »Waxaan ahaan doonaa hoggaamiyaha adduunka ee casriga ah tobanka sano ee soo socda - BGR
Marka laga Samsung Electronics Co., soo saaraha ugu weyn ee telefoonada smart kaalinta by dhalmo diyaaradaha, diiwaan hoos u dhac 60% ka mid ah ay faa'iido hawlgalka biloodle ah in dhowrkii maalmood ee la soo dhaafay - dhibicda ugu xumaa this muddo ka badan afar sano. dakkada in iibka casriga ah iyo hoosudhaca saamiyada ee chips xasuusta, waxay ahaayeen inta badan ay sabab u tahay xaqiiqada ah in shirkadda ayaa daabacay natiijooyinkii ugu dambeeyay . wareysi cusub Wargeyska Faransiiska Le Figaro taas oo uu ku dhawaaqay in tiknoolijiyada isku dhafan ay bulshada ka caawineyso in ay qaadato qayb ka mid ah mojo. Intaa ka sokow, wuxuu iska casilay hanjabaadii Huawei, oo doonaya in uu u wareego shirkadkiisii ​​ugu sarreeya qiimeynta aduunka, waxaana uu si kalsooni leh u balan qaaday in Samsung uu ahaan doono hoggaamiyaha suuqyada ee casriga ugu yaraan muddo sanado ah.
Qaybtan ugu dambeysa waxay ku saabsan tahay fikradda muraayadaha cusub. waayo-aragnimada, waa in middani ay u technology phone flip cusub in muujin doonaa in Samsung Galaxy laab casriga ah ee mustaqbalka. In Maraykanka, wax soo saarka ayaa la qorsheeyay April 26, waqti ay ku shixnadaha caalamiga ah ee casriga ah ka Samsung dhab ka gaabsaday: 290 2018 million unugyada, tusaale ahaan, dhanka ah ku dhowaad 318 million cutubyo ka sannadkii hore.
Macluumaadkaan waxay ka timaadaa tijaabada 'Market Counterpoint Research Technology', oo sidoo kale muujinaysa sida shirkadda Shiinaha ee Huawei ay u bilaabi doonto inay halis ku noqoto Samsung. Waxaan horey u soo sheegnay in Huawei uu si xeeladaysan u raadin lahaa heerka ugu sarreeya ee casriga ah ee aduunka, inkastoo laga reebay suuqyo badan oo reer galbeedka ah sida Maraykanka, iyo tirooyinkoodii ugu dambeeyay waxay muujinaysaa adkeysigeeda. Intii uu Samsung ka hooseeyay 2017 ilaa 2018, Huawei waxa uu arkay kororka iibka qalabka smartphone ee 153 million ilaa ku dhawaad ​​206 million.
Foldables hubaal noqon doonaa wax soo saarka Misbaax waayo, haatan, laakiin Koh sheegay in Samsung ayaa isku dayaya inuu sharad nooc ka mid ah arxandarro leh casriga ah guud ahaan - marka la eego in aan bartey loo isticmaalo si ay u laydiga sida caajis muraayad oo leh shaashooyin waaweyn - waxaa lagu daaweyn karaa badeecad cusub oo cusub sida telefoonka isku laaban. " Personnellement, je vois un potentiel énorme pour le segment des smartphones pliables, a-t-il déclaré au journal français. Les consommateurs recherchent des écrans plus grands sans sacrifier la portabilité.
Source source: Samsung